Kedu ka ndị mmadụ nwere ike isi kwuo banyere 'mmata' na n'otu oge ahụ iji nyere aka na-elekọta usoro ahụ? : Martin Vrijland
EGO EGO NA-EGO
DIRECT (na-enweghị PayPal)
Kedu ka ndị mmadụ nwere ike isi kwuo banyere 'mmata' na n'otu oge ahụ iji nyere aka na-elekọta usoro ahụ?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 3 July 2019	• 4 Comments
Ị na-anụ ọtụtụ ndị na-ekwu okwu gbasara nsụhọ. Ụfọdụ na-achọ guru; ndị ọzọ na-atụgharị uche ma ọ bụ na-eme yoga; ndị ọzọ na-aga chọọchị ma ọ bụ na-etinye aka n'ụdị okpukpe ma ọ bụ ọnọdụ ime mmụọ. Ihe omimi di omimi bu otutu ndi mmadu yiri ka ha na acho ime ka ugbo ha di nma ka ha n'ejeghari n'osimiri nke naeduga n'abis?
Kedu ka ị ga - esi kwuo maka ịmara ma ọ bụrụ na ị na - enyere aka na - enwe usoro ahụ? Kedu usoro? Usoro nke na-adabere kpamkpam imebi nsụhọ; usoro nke anyi na ichikota na okwu a bu 'obodo'. Kedu ka ị ga - esi nọgide na - esonye na agbụrụ agbụrụ nke ọha mmadụ; ekwu banyere ịmara na -eme ụdị ọdịiche dị iche iche nke ime mmụọ, ebe ọha mmadụ na-emebi nsụhọ zuru ezu? Ọ bụghị oge iji tinye ụgbọ mmiri gị n'ọdụ ụgbọ mmiri iji nweta ihe ọ bụla na-eme?
Site na mmeghe a i nwere ike iche:Ọ dịghị ihe ziri ezi! Abụ m onye kwere ekwe ma ọ bụ na m bụ onye ime mmụọ ma ana m enyere aka ime ka ụwa dịwanye mma site na àgwà ahụ na ndụ". Ma ị na-ebili n'ụtụtụ iji rụọ ọrụ na usoro nke dabeere na ịgba ohu na ịdabere na ndị ndú ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ị nwekwara ike ịmepụta maka, na-enwe olileanya na ndị ọrụ ohi ọhụrụ ahụ ga-eme nke ọma mgbe ahụ gara aga. "Ma gịnị ka ị chọrọ ka Vrijland mee? Ọgba aghara? Agaghị m akwụsị ịkwụ ụgwọ ụtụ n'onwe m, agaghị m ahapụ ọrụ m n'onwe m. Mgbe ahụ, enwere m ihe ọ bụla ma ọ bụ enwere m ntaramahụhụ na ikpe na ụtụ isi na a ga-achụpụ m n'ụlọ m ma enwekwaghị ike ịkwado ezinụlọ m".
Agwara m onye tinyere afọ 5 na ụlọ mkpọrọ Texas dịka ụda nke esemokwu azụmahịa na onye na-ebi akwụkwọ na-emepụta ihe banyere nchọpụta patent. Na-enweghị akọwa nke a n'ụzọ zuru ezu, ahụmahụ ya na ụlọ mkpọrọ a dị mma iji kọwaa obere oge ebe a.
Nwoke ahụ kwuru na e nwere ụdị ọgba aghara n'ụlọ mkpọrọ a (ya na puku ndị mkpọrọ ole na ole), bụ nke ndị nche na-agbanyeghi ma ọ bụ na-agbanyeghị ike ime iwu ndị a na-edeghị ede n'etiti ndị mkpọrọ n'onwe ha. Ọ bụrụ na ha chọrọ mmiri na-ekpo ọkụ, ha nwere ike ime ka nke a dị ike site na ịtọkọta ọrụ ahụ. O gosikwara na o nweghi ihe ojoo o bula, n'ihi na e nwere otu usoro ndi otu n'etiti ndi di iche iche na ndi okenye nke agburu (ndi tinye onwe ha n'ulo mkporo). Ụdị ụbụrụ a, gụnyere ụkpụrụ omume ya, nọgidere na-agbaso n'agbanyeghị ọbịbịa na nke ndị mkpọrọ.
N'ezie, o kwuru na ọha mmadụ na-emeghị ihe ọ bụla nke na-arụ ọrụ nke ụlọ mkpọrọ; n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ihe niile mere n'ime mgbidi ụlọ mkpọrọ ahụ. Ụdị anarchist a adịghị adabere na iwu na iwu, mana na nkwanye ùgwù, nkwekọrịta na ike ike nke ebo dị iche iche. Ọ bụrụ na otu onye n'ime ìgwè ahụ mehiere, ìgwè ahụ edoziri nke a site n'ịgwa onye ahụ okwu. N'ezie, o jiri ya tụnyere otú nke a si arụ ọrụ na ebo India oge ochie; ndị India bụ ndị mbụ biri n'America wee biri n'udo n'enweghị ndị uweojii, iwu, ụlọ akwụkwọ na ụlọ mkpọrọ (ruo mgbe Columbus rutere).
N'ezie, ụlọ mkpọrọ dị otú ahụ bụ ihe ntanetị nke ụmụ mmadụ n'ozuzu, ebe anyị yiri ka anyị na-adịkwu ndụ na ụlọ mkpọrọ na-enweghị oghere ndị a na-ahụ anya. N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ ndị aghọtabeghị nke a, n'ihi na ha onwe ha bụ akụkụ nke "ndị nche". Ndị ọzọ na-arụ ọrụ na agụmakwụkwọ, dịka ọmụmaatụ, ebe agbụrụ ọgbọ ọhụrụ nke ndị nche. Site na 'nche' Achọpụtara m: ọgbọ ọhụrụ nke ndị nlekọta, ndị na-azụ ọzụzụ, ndị nlekọta, ndị nlekọta ụtụ, ndị uweojii, ndị agha, ndị na-akwụ ụgwọ, ndị ọka iwu, na ihe ndị ọzọ. Ndị ọzọ na-arụ ọrụ maka gọọmentị, maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka onwe ha, na-enye ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa nye ndị gọọmenti ma ọ bụ ndị ọchịchị. Ọtụtụ ọrụ na-arụ ọrụ na-atụgharị ma ọ bụ na ntụgharị ihu na ọnọdụ nke na-enye aka na njikwa nke ụlọ mkpọrọ ahụ nke anyị na-akpọkarị "ọha mmadụ." Na ndi mmadu ndi na-aru oru n'ime ulo elu nke dome ahu, ka enwere obi uto na anyi na-eme nke oma. A sị ka e kwuwe, mgbe ị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, akụkụ na nke ọzọ, ndị mmadụ na-arụ ọrụ maka usoro a gbara gị gburugburu.
N'ụzọ dị mwute, ihe atụ nke ụlọ mkpọrọ Texan na-aghọ ihe dị ntakịrị ma na-abaghị uru, n'ihi na ọnụ ọgụgụ nke ndị mkpọrọ na ndị nche dị n'ebe ahụ dị iche iche. Ọtụtụ puku ndị mkpọrọ na obere iri na abụọ nche. N'ụlọ anyị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọtụtụ ndị na-emepụta ihe, ndị na-eme ihe na ndị na-achịkwa iwu na iwu na ndị nwere ịhụnanya maka usoro nke onwe ha na ọnọdụ ha na ya (n'ihi na ha na-enweta ndụ ha). Ihe mgbochi nke anarchist nke na-eme ka mmadụ na-adabere na ya (dị ka onye mkpọrọ mbụ m kwuru na ya) gosiri na o yiri ka a ga-ewepụ ya nhọrọ. Ohaneze anyị dị ka ihe mere n'oge nchọpụta Stanford (Zimbardo) (gụọ ebe a).
Ma ị nwekwara ike ikwu na enwere olileanya ma ọ bụrụ na ndị niile ahụ na-etinye aka n'okpukpe, nke ime mmụọ, yoga, na ụkwụ, na ihe ndị ọzọ, were ụgbọ mmiri ime mmụọ na-egbuke egbuke site n'osimiri (nke na-asọba n'abis). Ka ị chere na a gaghị enwe abis? Ị chere na ọ bụ naanị otu ụzọ ọha mmadụ nwere ike isi rụọ ọrụ; Ọ bụ otú ahụ ka anyị si ahụ ya? Ị ghọtara na anyị na-aga n'ihu na steeti ndị uweojii, nke a na-eme ka ụdị nnwere onwe ọ bụla dịkwuo ntakịrị na onye ọ bụla ga-agba egwu n'ime iwu dị iche iche nke iwu obodo na iwu?
Ọ bụrụ na ndị mmadụ na-enwe nchegbu banyere mmụma, mgbe ahụ, enwere ọnọdụ na-adịghị mma nke ga-amasị ihe dị iche. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị na-ada maka olileanya ụgha nke okpukpe ma ghara ịghọta na otu okpukpe ahụ bụ echiche nke 'usoro' ahụ, bu n'obi ịmepụta mmadụ abụọ (polarity) n'ime ọha mmadụ na ugbu a ijide olileanya ụgha nke onye nzọpụta dị ka nchara . Sousaji ahụ na-eme ka o doo anya na ndị mmadụ nọgidere na-enwe olileanya maka mgbanwe, na-enweghị ime ka ha mara. 'Mee ọ rụọ ọrụ' nwere ike ọ gaghị abụ okwu ziri ezi na nke a. 'Ịzụ ahịa site na' nwere ike ịbụ nkọwa ka mma. Ọ bụ oge dị elu ọ bụghị nanị ịkwado ụlọ na oche nke ụgbọ mmiri ahụ (site na ime mmụọ, bikram yoga, ntụgharị uche ma ọ bụ ekpere), ma buru hel ma wepụ ụgbọ ahụ site na mmiri site na usoro ahụ . Ikekwe ọ na-akpali akpali ma ọ bụrụ na ị chọpụta na osimiri ahụ na-eduba n'abis.
Otutu ihe omimi nke ime mmụọ na-eme ka i kpochapu ulo ma obu oche nke ugbo gi, ma adighi agba gi ume ka i buru ugbua gi n'osimiri ma gaa n'atu.
Gini bu ihe omuma?
Ọ nwere ike ịba uru na ọnọdụ ahụ iji buru ụzọ kọwaa njirimara. Ndị sayensị na ụlọ ọrụ ndị dị ka mkpụrụ akwụkwọ Google na-etinye ọtụtụ ọrụ na ego na ịkepụta ụbụrụ mmadụ. CEO nke Google bụ Ray Kurzweil kwenyesiri ike na ntụgharị uche bụ nsị ọnụ ọgụgụ nke neurons na okpokoro isi anyị nakwa na nke a bụ ihe kpatara ụmụ mmadụ ji ama onwe ha site na mammals. Nke a ga-abụ n'ihi na ụmụ mmadụ nwere neo-cortex ma nweekwa ụbụrụ ụbụrụ zuru oke ka ha nwee mmata. Maka sayensị na ụlọ ọrụ ndị dị elu, ịmara bụ ihe si na ụbụrụ pụta. Nkọwa m banyere omuma bụ ihe na-agbanwe: Ịmara bụ na ma ọ bụ na ọṅụ nke na-eme ka ụmụ mmadụ ghara ịdị ndụ-avatar.
Iji ghọta nke ahụ, ị ​​ghaghị ibu ụzọ ghọta na anyị na-ebi na nkwekọrịta ọtụtụ ọkpụkpọ. Nke ahụ nwere ike ịdị ka "kpam kpam pụọ na Chineke'(nzuzu) na nti, ma ghara ichegbu onwe gi; ọ dịkwa mma maka ndị transhumanists na ndị ọkà mmụta sayensị site na otu ụlọ ọrụ ịzụ ahịa dị ukwuu na-agwa gị na anyị na-ebi na nkwekọrịta. Ndị dị ka Elon Musk dịka ime nke ahụ (na maka ihe kpatara ya). Otú ọ dị, ha ekwughị na anyị bi na simulation nke Lucifer.
Ọ bụrụ na ị na-agụ usoro isiokwu m banyere nkedo, ị nwere ike chọpụta na physics dị oke (ma ọ bụrụ na a sụgharịrị ma ghọta ya n'ụzọ ziri ezi) na-enye ihe akaebe zuru oke nke echiche ahụ na anyị bi n'ime nkwekọrịta. M na-enye nkọwa dị mkpa nke nke a isiokwu a. Ọ dịkwa uru na ọnọdụ ahụ iji gaa na ndepụta nke ebe nrụọrụ weebụ a ma họrọ ihe omume menu 'nkedo'.
"Ibi na" abughi ezi nghota. Anyị adịghị 'na-ebi ndụ' n'emehie: anyị bụ ndị na-ekiri ihe na ndị na-eme egwuregwu. Anyị dị, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ndị na-anọdụ n'elu ihe ndina ya na onye nchịkwa (ma ọ bụ 'ọṅụ' maka ọgbọ ochie) ma lee anya na ihuenyo nke anyị na-ahụ ihe ọkpụkpọ ahụ; onye ọkpụkpọ / avatar na-ekere òkè n'egwuregwu ahụ na ihuenyo. Ahụ anyị tinyere ụbụrụ bụ ndị ọkpụkpụ na egwuregwu egwuregwu a. Anyị nwere AI (artificial intelligent) avatars na bio-brain nke na-eche ọtụtụ, nwere mmetụta uche na nwere ike ịtụle nhọrọ, ma onye ọkpụkpọ ahụ bụ ihe mpụga. Otú ọ dị, ndị ọgbọ anyị nwere mmetụta dị ukwuu ma dị egwu, dị ka ụwa nke 'na-enwu' gburugburu anyị.
Ị gaghị achọta okwu ndị dị oke egwu? Ọ bụghị ma ọ bụrụ na ị ghọtara nnwale abụọ nke nyocha physicist Niels Bohr, bụ nke a gosipụtara na ọ bụ naanị okwu dị na nchọpụta; dị ka ihe oyiyi na Playstation TV naanị dị na ọ bụrụ na ị na-akwagharị onye na-achị gị ma lee akụkụ nke ụwa na oge na egwuregwu ahụ.
Nkọwa nke omuma, nke dabeere na nghọta a bụ mgbe ahụ: onye ọzọ na-achịkwa ahụ na ụbụrụ gị ma mee nhọrọ ndị ị chere ụbụrụ gị na-ewe. Mmata na-abịa n'ihi na ụbụrụ na n'ihi na ihe ọ bụla. Ịmara bụ n'èzí nke eziokwu a. Ịmara bụ onye ị bụ. Ị maara; ị bụghị ụbụrụ gị ma ọ bụ ahụ gị. Ahụ gị bụ naanị avatar na nmegharị a.
Gbanwee site n'ama
Nanị ụzọ a ga - esi gbanwee nwere ike ime na ọkwa nke maara. Ọ bụ ya mere ọ dị ezigbo mkpa iji nweta ezigbo echiche otu esi kọwapụta eziokwu anyị. Ị ga-aghọta n'ezie na anyị bi na nkwekọrịta Luciferian multi-player, mgbe ahụ, ị ​​ga - ahụ na ihe niile na - eme site na ncheta nakwa na ị nwere ikike ịhọrọ ịkwanye ụgbọ gị n'ụsọ mmiri nakwa na mgbanwe ahụ ga - ekwe omume. N'eziokwu, ọ bụ aghụghọ n'ihi na ọ bụ kpọmkwem n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ dị ka ọ bụ onye na-ewu egwuregwu ahụ ka a na-amata (Lucifer) nke ọma akwukwo doro anya na nke egwuregwu (avatars) na egwuregwu ndị ga-enyere aka mezue edemede ahụ. Ya mere, ọ dị mkpa ka ọtụtụ ndị kwụsị ịkwụsị egwuregwu dịka edemede ahụ si dị.
O nwere ike ịbụ ihe kpatara anyị ji eme ka nyocha a. Ihe kpatara ya, M gbalịrị ịkọwa ya isiokwu a, nke m gbalịrị ịkọwa na nmepụta a bụ eleghị anya usoro nje na '' quantum field 'ma ọ bụ sel nke na-ejikọta ihe niile nke ịdị adị anyị (ụbụrụ ma ọ bụ ozi nke sitere na ya sitere na ya). Biko gụọ isiokwu ahụ nkenke.
Ọ ga-amasị m inye nkọwa site na isiokwu a ebe a:
I nwekwara ike ikwu na anyị ekwesịghị ichegbu onwe anyị maka nsogbu ndị a na nmegharị a, ọ bụghị maka ebumnuche nke usoro nje virus: iji merie ma rụzie ya. Ahụ gị pụkwara ịlanarị mwakpo nje. Ụdị ọdịdị gị (mkpụrụ obi ma ọ bụ ihe ọbụla ịchọrọ ịkpọ ya) nwere ike ịlanahụ ọgụ ọgụ. Otú ọ dị, anyị chere na anyị kwesịrị ime nke a na ọkwa Sims avatar. Nke ahụ Ẹkot Otú ọ dị, ọ bụ onwe ya ihe dị na Sims. Ọ bụ akụkụ nke nje ahụ nje. A na - eme mmeri usoro nje virus site n'ịwakpo cell virus ahụ. Ọ bụghị site n'ime, kama site n'èzí. Lucifer na-etolite mmadụ, onye ọrụ ya bụ iji nwalee ụdị nke ọzọ nke ike maka ike ha na nke wuru ngwongwo nje a, ga-abụrịrị ihe a ga-eme ka ọ bụrụ nke a. Ya mere nke a na-eme na ọkwa nke nsụhọ.
Mee nzọụkwụ dị mkpa
Ọ na-emegide mmadụ niile (avatar) mmetụta (iche echiche) ime nhọrọ ndị ga-eme ka anyị daa na mpụga usoro. Ọ na-aga megide nchebe na nchebe iji tinye ụgbọ ahụ n'ụsọ mmiri. A sị ka e kwuwe, anyị na-eche na ọ bụrụ na anyị ejiri ego ahụ gaa, anyị nwere ike ịnọgide na-akwụ ụgwọ ụlọ ma ọ bụ nnyefe ego anyị. Anyị na-eche na mgbe anyị kwụsịrị ịrụ ọrụ na usoro ahụ, anyị enweghị ike ịkwado ezinụlọ anyị ma hapụ ihe niile. Anyị chere na anyị ga-edozi ya na iche echiche.
Naanị mgbe anyị weghachite njikwa nke avatar anyị na 'mmeghari n'ime egwuregwu' nye ndị nọ na bọtịnụ ahụ, anyị ga-achọpụta na ha nwere nkọwa kachasị mma nke egwuregwu ahụ. Ònye ka i chere nwere ike ime mkpebi kachasị mma: avatar na egwuregwu Playstation onwe ya ma ọ bụ onye na-achịkwa avatar?
Oge eruola ịmalite ịṅa ntị na ncheta ma na-eme ihe site na nsụhọ ahụ. Nke ahụ nwere ike ịpụta na ị ghaghị ime nhọrọ iji gbanwee ụzọ ma buru ụgbọ mmiri gị pụọ na mmiri ahụ. Nke ahụ pụtara na ị ghaghị ịkwụsị ụbụrụ avatar gị na gee ntị na nsụhọ gị. Ntụgharị uche ma ọ bụ ụdị ndị ọzọ niile na-emechi ọnụ gị kwesịrị ime ka ị buru ụgbọ mmiri gị ugbu a (na-eduga n'abis). Ọ bụrụ na nke ahụ abụghị ikpe, mgbe ahụ, ịchọrọ ihe kachasị mkpa na ihe niile ma na ị na-arụ ọrụ na-agbazi wiilị na ụgbọ mmiri gị. Ụgbọ mmiri gị na-egbu maramara site ntụgharị uche ma ọ bụ yoga (wdg) ga-aga n'ihu na-asọga abyss.
Anyị enweghị ike idozi nsogbu ndị dị n'ụwa site na iche echiche na ikwu okwu, mana n'ụzọ dị otú a:
Mkpụrụ obi, mkpụrụ obi na ahụ: gịnị ka ọ bụ na gịnị bụ ọrụ ha?
Kedu ihe dị iche iche, ihe dị omimi, olee otú e si arụ ọrụ anyị na ọnụọgụ ole?
Ọ bụrụ na amụma emezuo, ọ bụ ihe àmà na-egosi na nkwenkwe gị bụ eziokwu?
Tags: Avatar, ọkwa nke nsụhọ, Ẹkot, agba, mmụọ, okwukwe, ahụ, ọha mmadụ, ntụgharị uche, Okpukpe, nyocha, ọnọdụ ime mmụọ, usoro, gbanwee, yoga, zielen
3 July 2019 na 14: 34
Otu o si kwe omume, nke ahụ dị mfe ịza bụ ihu abụọ, enweghị ọkpụkpụ azụ ma họrọ ụzọ kachasị mfe. Ihe mere madurodam nnukwu site na-anọ obere ma ọ bụrụ na ihe dị njọ na ileba anya mbụ, a ka nwere nnukwu onye ọcha iji chebe ihe. N'ihi na ubi, ogige na dikes na-ọma nọgidere na-enwe ..
Ịmara na ọ dịghị nsogbu site na Prince ..
3 July 2019 na 18: 34
Ndị mmadụ maara nke ọma na ha amaghị na ha bi n'ime ọha mmadụ na-enwe ọgba aghara ebe a na-akwalite ya megide ihe ndị kpatara ya. Ha na-ekpochapụ nke ahụ dịka o kwere mee site na gọọmentị na-edozi ya nakwa n'ihi na ọ dị mma iji nọgide na-ekere òkè na ìgwè ehi. Ị nwere ike iche na nke a dị ka ihu abụọ. Mgbe ụfọdụ, ọnọdụ na omume dị ka ìgwè ehi anaghị ezu. Mgbe ahụ, ahụ erughị ala na-agbagha. N'ụzọ dị mma, enwere ụkwụ, ntụgharị uche, wdg, nke na-adịghị agbanwe agbanwe n'ọnọdụ anyị na-ahụ onwe anyị. Gurus anaghị akatọ usoro ihe a, ha dị mma ma bụrụ ndị na-enweghị isi, yabụ onye ọ bụla nwere ike ịkọwara ha guru nke guru. Ntụgharị uche bụ ụzọ ọzọ ị ga-esi gbanwee ọnọdụ ahụ ma gbanahụ ya n'ihi ọdịmma onwe gị. Ndi nke a nile na-arụ ọrụ nke ọma maka ụmụ okorobịa ahụ site na edemede ahụ. Ha abughi isiokwu na isiokwu nke nyocha na-eme ka ọ bụrụ ihe dị mkpa. Obi dị ha ezigbo ụtọ na e nwere ntụpọ, ntụgharị uche, wdg. Iji dọpụ atụrụ ahụ n'aka ha. Ọ dịkwa mma maka ìgwè ehi n'ihi na isi ha anaghị ewepụ ya. A sị ka e kwuwe, ha na-aga n'udo. Ọ bụghị ihe ndabara na ihe ka ọtụtụ n'ime ndị 'gurus', ndị na-atụgharị uche, na ndị ọzọ nwere ụmụ nwoke site na edemede.
Onye Kraịst van Offeren dere, sị:
31 July 2019 na 14: 54
George Kavassilas na-ekwu banyere ya otu a: have nwere usoro eke, hologram nke chi dị iche iche, na hologram teknụzụ (usoro ịme anwansị na ihe ndị ọzọ)
Yabụ ọ na-agwa ndị mmadụ nke zuru oke itinye uche na simulation na ha jikọrọ "hologram teknụzụ".
Agbanyeghị, eziokwu ga - abụ na ihe ndị a bụ ma anyị nwere ike jikọta isi ihe nke ezigbo ahụ dị adị n'otu oge.
Olee otú m ga-asị na ọ bụ:
Could nwere ike ikwu na enwere ọtụtụ ịme anwansị. N'uche m, simulation luciferian bụ naanị 1 dị ala na ihe omume.
"Achịcha luciferian na-adịghị mma" nke na-egwuri egwu n'ụwa, ihe ndị ọzọ, na "ọkwa luciferian dị mma" nke na-agba agba na-agbatị karịa.
Nyere na ihe niile dị n’etiti mbara igwe na-e fromomi site n’usoro eke .. nhazi / akụkụ, enwere ihe kpatara na enwere eziokwu gbara ọkpụrụkpụ n'ụzọ a ịme anwansị a si arụ ọrụ?
Ọ bụ naanị ihe mkpuchi nwere ike ịrụ ọrụ naanị na "eziokwu"?
31 July 2019 na 19: 32
Ọ bụrụ na ị ghọtara nkọwa anụ ahụ zuru oke ị ga-aghọta na okwu ahụ "ịme anwansị" abụghị methaphorical ma ghọta na echiche nke "prolo holographic" ezighi ezi (ma nwee ike jee ozi n'ụzọ ụfọdụ).
Anyị nwere ike itinye ụdị aha dị iche iche ... site na ndị Wingmakers na George huppelepup ma ọ bụ na ị nwere ike ịchọta ezigbo arụmọrụ onwe gị.
Now na-eme ugbu a ka ọ bụrụ hodgepodge ọzọ na Luciferian na-adịghị mma ma na-agba gburugburu.
Ngwakọta nke ụdị echiche niile (ịme anwansị / hologram) bụ ime ka ọ bụrụ ihe gbagwojuru anya na nke mmụọ. Ọ na -emepụta maze ka ọ bụ n'ezie mfe ịhụ ihe niile. Nwere ike gụọ ngwongwo gị niile gbasara akwụkwọ buru ibu ma ọ bụ ghọta ya n'ụzọ niile.
N'okwu dị iche iche, akọwaala m otu ị nwere ike isi mepụta simulations. Mgbe ufodu odi nma ka iguru ihe obula tupu iju pf ghara inye aka na iguzo ahiri.
" Echiche nke nkezi Dutchman anwụwo: ike na-agafe
Ọ bụ Ursula von der Leyen (onye isi oche EU n'ọdịnihu) bụ otu ụdị ọbara ahụ dịka ezinụlọ ndị eze Britain? »
ghọọ onye so na ya
ma ọ bụ nye onyinye
mgbakwunye maka ndị otu
Ndị nleta site na JULY 2017
Nleta nile: 15.833.475
Nwoke nwoke nke transgender na-amu nwa nke onye n’enweghi nmekorita nwoke na nwanyi inye onyinye nwanyi
Usoro mgbochi ụgbọ elu ndị Iran nke butere Boeing 737-800 (ụgbọ elu PS752)?
Ogologo oge ole ka Trump nọrọ na ọdụ ahụ ugbu a na-egosi ihe ịrịba ama mbụ nke agha obodo.
Iran, mwakpo a na Soleimani, ndị na-agha agha na ndị na-agbapụ ụgbọ elu PS752 setịpụrụ ọnọdụ ahụ?
Reincarnation na usoro nke eziokwu dịka anyị siri hụ ya
Tụlee op Usoro mgbochi ụgbọ elu ndị Iran nke butere Boeing 737-800 (ụgbọ elu PS752)?
Wilfred Bakker op Ogologo oge ole ka Trump nọrọ na ọdụ ahụ ugbu a na-egosi ihe ịrịba ama mbụ nke agha obodo.
SandinG op Usoro mgbochi ụgbọ elu ndị Iran nke butere Boeing 737-800 (ụgbọ elu PS752)?